Igama: Ioyile ebalulekileyo yeRosemary
Ingcaciso: 100% GC
Inkangeleko: UkuKhanya okuTyheli okuKhanyayo
Ukusebenza: Ukunyamekelwa kolusu, isicelo seCosmetic
Ioyile ebalulekileyo yeRosemary inevumba lomthi elahlukileyo, ibisetyenziselwa iinkulungwane ezahlukeneyo izibonelelo zempilo kunye nobuhle
Ukukhula kweenwele-Xa isetyenziswa entlonzeni, ioyile ebalulekileyo ye-rosemary iyanceda ukukhuthaza ukukhula kweenwele. Abantu abaninzi babanga ukuba inokugcina ivolumu yeenwele, icothise ukungwevu, kwaye iluncedo ekupheliseni inkwethu.
Ukuxhasa amabala amnyama aphelayo-Kuyanceda ukuphucula ukujikeleza kwaye kusebenza njengesixhobo sokubulala iintsholongwane, ukugcina inqanaba elisempilweni lokukhula kwebacteria. Ipropathi eyongezelelweyo yokubulala iintsholongwane inceda ukubetha ibacteria ebangela amabala amabi. Kungcono nokuba i-rosemary i-oyile ebalulekileyo iqulethe i-phytonutrients ekholelwa ukuba iyanceda ukulwa nomonakalo ohambelana simahla kunye ne-pigmentation.
Ukuba negalelo kuphuculo lwe-Eczema kunye nezinye iiMeko zoLusu ezivuthayo-ioyile ebalulekileyo yeRosemary inceda ukuthomalalisa i-eczema kunye nezinye iimeko zolusu ezinokuqaqamba ezinje nge-psoriasis, i-rosacea kunye nerhashalala ngenxa yeepropathi zayo ezinamandla okulwa nokudumba kunye neempawu zayo zokulwa nokulwa ezigcina ulusu lukhululekile kwintsholongwane. kunye nezinye izinto ezicaphukisayo eziqhubeka zonyusa i-eczema. Hlanganisa ioyile ye-rosemary kwinto ethomalalisayo njengebhotolo ye-shea okanye ioyile yekhokhonathi kwaye uyisebenzise njengesithambisi samachaphaza e-eczema.
Gcina ibhalansi esempilweni yoLusu lweoyile -Ukuba ukhe wafaka i-rosemary yeoyile ebalulekileyo kulusu lwakho, kuya kufuneka uqaphele ukuba lomelele kwaye lomise ulusu lwakho kwangoko. Kungenxa yokuba le yinto enamandla yokulwa nosinga exhasa ukususa ioyile egqithisileyo kulusu.
Sula i-Cellulite-Olunye uncedo olumangalisayo lweoyile ye-rosemary ebalulekileyo kulusu luyanceda ukucacisa i-cellulite! Yaziwa ngokubanzi njengeyona nto ivuselelayo yokujikeleza kwegazi kwaye inceda ukucoca i-cellulite ngokukhuthaza ukuhamba kwenkunkuma kunye neetyhefu, ezinokuthi ziqokelele zenze i-cellulite.
Ii-Unclogs ezivaliweyo zePores- ioyile ebaluleke kakhulu eRosemary yioyile ebalulekileyo yokunciphisa ukuxinana kubandakanya ukudibana kwesikhumba. Inceda ngokucocekileyo ukucoca ulusu oluxineneyo ngokuyicoca ukusuka kubunzulu bembobo kunye nokugxotha i-sebum endala, iiseli ezifileyo, ukungcola, ukungcola, ungcoliseko, iintsholongwane kunye nokunye ukungcola.
Ukuqina kunye neToni Ulusu - Ngaba ulusu luyekelele kwaye luyekelele? Sebenzisa i-rosemary i-oyile ebalulekileyo, eneempawu ezintle zokugungqa, ukwenza ulusu lwakho luqine kwaye luthambe.
Umbala otyheli ocacileyo kunye nocacileyo
Ioyile yeRosemary inevumba elimnandi elikhethekileyo
+ 0.8435 °
Ukunyibilika ngokupheleleyo kumthamo ofanayo we-90% ye-ethanol